Dilalka ka dhaca Koonfur Africa ma lala bar-bar dhigi karaa 'goob dagaal'? - BBC News Somali
Wasiirka booliska ee dalka Koonfur Africa Bheki Cele ayaa sheegay in dhacdooyinka dilalka ah ee faraha badan ay dalkiisa ka dhigeen meel "xuduudd la leh goob dagaal".
"Dadaal xooggan waxaan ugu jirnaa in arrintaan wax laga qabto," ayuu yiri.
Daraasad ay dowladda ka sameysay xaddiga fal dambiyeedyada ayaa muujisay in dilal ka badan 20,000 ay waddankaas ka dhaceen sannadkii 2017 kaasi oo sare u kac 7% marka loo eego sannadkii ka horreeyay.
Wasiirka ayaa sheegay taasi in ay ka dhigantahay in maalin kasta ay dhacayeen 57 fal oo dil ah.
Laakiin miyuu ku saxnaa inuu Koonfur Africa la barbar dhigo goob dagaal?
Heerka dilalka, oo lagu xisaabiyo tirada shacabka dalka waa hab wanaagsan oo lagu muujin karo xaddiga dhimashada.
Qaran ahaan cabirkaas wuxuu soo saaraa sawir tix galin weyn leh.
Dalka Koonfur Africa, sannadkii la soo dhaafay dilalka laga geystay waxay ahaayeen 35.8 ka mid ah 100,000 oo ruuxba.
Shanti sano ee la soo dhaafay ayay sare u kacayeen dilalka ka dib markii in ka badan toban sano oo xilligaas ka horreysay ay hoos u dhacayeen.
Hase ahaatee xaddiga dilalka la geysto ayaa intaas labalaabkeed ahaa sannadkii 1993-kii oo ahaa hal sano ka hor markii uu dhamaaday qalalaasihii isir naceybka.
Waxaan eegi doonnaa meelaha ugu xun ee ay ka dhacaan dilalka ugu badan , laakiin marka hore, sidee waddankaan loo bar bar dhigi karaa dalalka kale ee caalamka?
Koonfur Africa ayaa sannadkii 2015-kii noqotay dalka shanaad ee ugu dilalka badan caalamka, sida lagu sheegay macluumaadkii ugu dambeeyay ee ay soo saartay hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dambiyada iyo daroogada ee UNODC.
Tiradan ayaa ah mid aad u badan marki loo eego dalalka kale ee Qaaradda Africa.
2,751 dil ayaa Kenya ka dhacday sannadkii 2016-kii, sida lagu muujiyay macluumaad ay soo saareen booliiska.
Markii lagu xisaabo tirada shacabka, dilalkaas waxay noqonayaan 5.7 oo ka mid ah 100,000 ee qof.
Dalka Nigeria dilalkii ka dhacay sannadkii 2015-kii waxay ahaayeen 9.79 oo ka mid ah 100,000 ee qof.
Markii laga soo tago qaaradda Africa, dilalkii Brazil ka dhacay sannadkii 2017-kii waxay ahaayeen 30.8 oo ka mid ah 100,000 oo ruuxba.
Hay'adda UNODC ayaa sheegtay in waddamada caalamku ay ku kala duwanyihiin sharciyada ciqaabta ee ay u dajiyeen fal dambiyeedyada.
Waxaa sidoo kale jiri karta saameyn xooggan oo ka dhalan karta sida falalkaas loogu soo war galiyo booliska ama loo diiwaan galiyo.
Marka sidee Koonfur Africa loo barbar dhigi karaa dalalka ay dagaallada hareeyeen?
Machadka caalamiga ah ee uruuriya macluumaadka ku saabsan dhimashada ka dhalata dagaallada hubeysan ee magaciisa loo soo gaabiyo IISS ayaa macluumaad ka sameeyay dalal dhowr ah oo ay dagaallo ka jiraan.
Xaddiga dhimashada ee uu machadkaas macluumaadkiisa ku soo daray waxaa ka mid ah kuwa ka dhashay weerarrada argagixiso oo laftooda qeyb ka ah dhinacyada ku lugta leh dagaallada.
Dalka Soomaaliya, oo ay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya midowga Africa dagaal kula jiraan al-Shabab, wuxuu machadka IISS ka diiwaan galiyay sannadkii 2017-kii dhimasho gaareysa 5,500 oo ka dhalatay dagaallada, taasoo ka dhigan 38.4 oo ka mid ah 100,000 ee ruuxba. Tiradaas ayaa ka badan midda Koonfur Africa, iyadoo xitaa laga reebay dilalka shakhsiyaadka.
Image caption Dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ay qorshaynayso in ay kordhiso tirada booliiska
Waddanka Afqaanistaan, waxaa sannadkii la soo dhaafay ka dhacday dhimasho gaareysa 14,000 oo ay sababeen isku dhacyada u dhaxeeya xoogagga dowladda iyo xulafadooda oo isku dhinac ah iyo kooxaha ka soo hor jeeda oo dhinaca kale ah. Taasina waxay u dhigantaa xaddi dhan 40.4.
Dalka yemen waxaa isla sannadkaas ka dhacday 17,000 oo dhimasho - oo u dhiganta 61.6.
Ciraaq waxaa sannadkaas gudihiisa ka dhacday 15,000 oo dhimasho oo ay sababeen dagaallada - taasoo iyana ah xaddi la eg 40.3.